Kedụ ka usoro Marmaray si emetụta njem ụgbọ mmiri? Olee ihe ndị anyị lebara anya? | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulKedu ka ọrụ Marmaray si emetụta njem ụgbọ mmiri? Kedu usoro e ji?
16 / 04 / 2012 34 Istanbul, ỤWA, General, Isi akụkọ, Turkey
Ọrụ Marmaray ga-emetụta n'ụzọ dị ukwuu njem ụgbọ mmiri nke obodo. N'ihi na mpaghara a bụ mpaghara ebe Obodo Lines na ụlọ ọrụ ụgbọ njem nkeonwe na-ebuga 80% na njem ụgbọ mmiri. Eminönü, Haydarpaşa, KadıköyEbe dị n'ime hexagon dị ka Beşiktaş, Üsküdar, Karaköy. O zuru oke na Marmaray ga-emetụta nke a. Anyi makwaara na oru ngo a abughi oru ngo nke oke osimiri. Anyị na-eche na ọ ga-emetụta n’ụzọ dị mkpa ihe anyị ga-agafe njem. N’ihi nke a, ikike iburu ndị njem karịrị okpukpu atọ nke ụgbọ mmiri. IMM nwere nhazi nke jikọtara njem ọha na eze na nkwado nke Ministry of Transport, Maritime Affairs na Nkwukọrịta. İBB, nke na-arụ ọrụ iweta ọrụ ka mma n'ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche, na-agba mbọ ime ka netwọọdụ ọrụ ya jiri ụdị dị iche iche. Anyị bụ otu n'ime ụdị ndị a. Transportationgbọ njem n'oké osimiri enweghị atụ maka Istanbul, nke mmiri gbara n'akụkụ niile. Ọ bụ ezie na enwere ọrụ ndị ọzọ, ụgbọ mmiri ga-adaba na mpaghara ụfọdụ, mana ọ ga-ahụ ndozi na mpaghara dị iche iche.
N'ezie, ọrụ Marmaray ga-emetụta uzo yiri Üsküdar-Eminönü. Ụzọ kachasị mma anyị na-aga. Anyị ga-emegharị ụgbọ elu anyị. Anyị na-enyocha. Mmetụta ụgbọ njem nwere mmetụta, mgbe ị hụkwara nsonaazụ ndị bara uru, anyị ga-emepụta ihe ndị ọzọ n'ụzọ kwekọrọ na ya. Mbido Metrobus natara ọtụtụ nkatọ na mmalite oge. Ugbu a, 1 aghọwo ihe oru ngo nke na-eru nso nde ndị njem. O jikwa ike ịdọta ndị njem na njem ụgbọ mmiri. Anyị na-atụ anya na ọrụ Marmaray ga-enwe ihe ịga nke ọma karịa atụ anya site na ijikọta ya na ndị ọzọ metro transports. Anyị ga-atụgharị ọnụahịa anyị na usoro ikpe-ikpe. Anyị na-ahụrịrị anya na a ga-ebelata 50%, anyị na-arụkọ ọrụ anyị na Ministụ dị iche iche. Anyị kwesịrị ịmepụta ọrụ ọhụrụ na njem ụgbọ mmiri, anyị kwesịrị ịkekọrịta nke a na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ụgbọ njem ụgbọ mmiri na-aga azụ karịa njem ụgbọ ala. Iji kpochapụ ọnọdụ a, ọ dị anyị mkpa ịzụlite onwe anyị ma rụọ ọrụ dị iche iche. N'echiche a, anyị meghere Üsküdar-Beşiktaş na afọ gara aga, nke anyị chere ga-abawanye nwayọọ. N'ezie agwaetiti nile dị mkpa. Karịsịa, usoro ndị dị n'èzí Marmaray ga-adọrọ mmasị karị maka njem ụgbọ mmiri ndị dị n'obodo ukwu.
Otú Marmaray si emetụta Ahịa Ụlọ
Kedụ ka Line Bursaray City Hospital Line si emetụta Mudanya okporo ụzọ na-agafe agafe?
Ala ọma jijiji a na-atụ anya ya na-emetụta The Marmaray (Video)
YHT na-emetụta usoro ụgbọ ala
Ndi ego na nkwụnye ego na-emetụta usoro ịkụ nzọ ụkwụ dị elu?
Ikpo Nagbọ mmiri na nke Navy butere Oke Ọzụzụ na Oke Osimiri na Mediterranean
Nkwupụta Obi Ụtọ: KAYAŞ-IRMAK-KIRIKKALE - NKWUKWỌ NKWUKWU ỤLỌ NKWU
Ogige okporo ụzọ 88 kwa afọ bụ Yahşihan dị n'okpuru nchebe